FAAQIDAAD: Shariif Xasan oo Maamulka K/Galbeed Dib ugu celiyey Xaaladii Ku-meelgaarka ahayd | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha xilligiisu dhammaanayo ee maamulka K/Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maamulka K/Galbeed ee Soomaaliya dib ugu celiyey xaaladii Kumeelgaarka ahayd ee isaga lagu soo doortay, kadib markii odayaasha dhaqanka K/Galbeed ay shaaciyeen inay dib u dhigeen muddo aan la cayimin Dooraashadii Madaxweynaha.
Go’aanka aya maanta soo saareen 30 ka mida Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in faragelin ka timid dowladda Federaalka darteed dib loogu dhigay doorashadii Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. [AKHRI WARKA]
Odayaasha ayaa go’aankooda u daliishaday qodobka 60-aad ee Dastuurka Koonfur Galbeed kaasoo sheegaya in xilliga KMG ah ay odayaasha dhaqanka marjic u noqon karaan markii ay la soo gudboonaato xaalado ay golayaasha maamulkaasi ugu yeertaan.
HOOS KA AKHRI QODOBADDA DASTUURKA MAAMULKA KOOFUR GALBEED EE AWOODDA ODAYAASHA DHAQANKA
Inkastoo xaaladii KMG ahayd laga soo gudbay markii la dhisay Baarlamaanka K/Galbeed, isla markaana qodobkaasi waqtigiisu dhammaaday haddana awoodaha aan kala caddeyn ee odayasha ayaa u qoran qaab si waliba loo macneyn karo.
Arrintan ayaa ka dhigan in awoodii Baarlamaanka Koonfur Galbeed ay la wareegeen odayaasha maamulkaasi oo intooda badan taageersan Shariif Xasan Sheekh Aadan, taasoo maamulka gelineysa xaalad xiisad siyaasadeed ah oo aan laga fiirsan.
Guddoomiyaha Baarlamanka Koonfur Galbeed C/qaadir Sheekunaa Maye oo aad ugu dhow Shariif Xasan ayaa lagu waday inuu is casilo, taasoo laga yaabo inay jidka ku soo jirto, waxaana maamulka Koonfur Galbeed mar kale dib ugu laabanayaa xaaladii KMG ahayd ee ay odayasha iyo ergada ay soo xuleen ay dooran jireen Madaxweynaha, haddii ay suuragasha qorshaha uu dejiyey Shariif Xasan.
Xaaladda Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqon doonta mid ku danbeysa laba xaaladood oo midkoodna aanu dhibaato yareyn:
1- In Baarlamaanka K/Galbeed ku kala qeybsamo go’aanka odayaasha, sidaasina doorasho dhantaalan ku dhacdo, maamulkaasina madaxa la galo xaalad aan ka fiicneyn tan maamulka Galmudug.
1- In Odayaasha taageersan Shariif Xasan ay ku dhawaaqaan inay sanad ama laba sano ah u kordhiyaan Shariif Xasan, sida qorshuhu yahay oo iyaduna xiisad ka dhalin karta maalinka Koonfur Galbeed.
Xalka ugu sahlan ee Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ah inuu tanaasulo Shariif Xasan mar haddii uu xaqiiqsaday inuusan ku guuleysan doonn doorasho xilligan dhacda, sidaasina ku badbaado maamulka K/Galbeed, taasoo ah go’aan aanay taageereynin taariikhda siyaasadeed ee Shariifka oo ku socotay is mari waa iyo kala tag siyaasadeed.
Previous articleAskarigii ka dambeeyay Haweeney Lagu dilay Muqdisho oo isu dhiibay Ciidamada Dowladda
Next article12 ka mida Guddiga Doorashada K/Galbeed oo ku dhawaaqay inay sii wadayaan Doorashada Madaxweynaha